Nhasi dumbu kutamba kuwedzera kukurumbira. Izvi kwakadai Oriental Art vanoda kudzidza vangani runako ano. Kune Studios zhinji, apo vanodzidzisa Oriental kutamba. Zvisinei, pano mutambi koshitomu haangavi kukonzera. Kusarudza izvozvo, unofanira kusarudza wokugadzira. Mavara vanofanira kuwana kwete chete zvokuti aida vateereri, asi kuitira kuti vakauya zvakananga kwamuri.
Traditional Arab koshitomu zvachose anovanza muviri mutambi wacho. Anobva rakavhurika chete tsoka, maoko uye chiso. Zvisinei, panzvimbo, tinoona zvakasiyana zvachose: koshitomu rinoumbwa chete ane bodice, siketi uye bhandi. Magadzirirwo magungano akadai akanyorerwa vasikana anoitwa mu "Cabaret." Hembe apo anowedzera wakashongedzwa magirazi marozari, rhinestones uye mupendero.
Mwedzi okudzidziswa rokutanga: sei kupfeka?
Chokwadi, kuti chinokodzera Oriental vachitamba akanaka uye kuyevedza, asi kana uchangotanga kuita kuti kutamba mhando iyi, zvino pakarepo wana chinhu chakadai hazvisi zvakakodzera. Rangarirai kuti mwedzi nokurovedza muviri wako vachatongerwa zhinji kuchinja vokutanga. Talia uchava rakanatswa, namafuta deposits zvachose.
Tanga kudzidza dumbu kudhanzi nani mune nebhurukwa uye leggings uye pfupi hembe kana pamusoro. Uyezve, pamusoro kwenguva, izvozvo zvichaita kuti kutenga zvinhu zvakadai zvipfeko nokuda dzokuMabvazuva kutamba, akadai bhandi ne mari, rin'i iyo achasika zvimwe kurudziro uye afare patinenge.
Sei kusarudza zvakanaka hembe kuti Oriental kutamba
Usati wasarudza imwe hembe kuti dumbu kutamba, zvakakodzera kutsanangura wokugadzira. Kana uchida pevairwara koshitomu, ipapo zvichava zvakakodzera kuratidza tsika Ensemble. Kana uri munhu anoda zvidavado Raks El Sharki, Oriental uye cabaret, nhasi akakodzera masutu pamwe tatamuka zvakasimba-richishanda pamipendero yakavakirwa. Kwavari, kazhinji kushandisa kunzwisisa zvinochinja rakamonana nhembe, asi vazhinji mutengo uye zvachose pasina pavo. Asi muchiitiko chino zvichaita zvakafanira kuti kuitawo rokumusoro chikamu mupendero masa marozari kana semanekiresi. A Kuwedzera kukuru kuti inoita richava rakanaka kushongedzwa.
Usati wasarudza sutu kuti dumbu kudhanzi, unofanira kufunga kwaunoenda kurishandisa. In kutaura kuti vateereri? At kutamba makwikwi? Munhuwo kudzidziswa?
Yeuka kuti mumufananidzo zvinokosha kusarudza mimhanzi uye kutamba nemanyorerwo. Izvi zvakare sarudzo rejira kuti mapfekero uye ayo ruvara.
Imhandoi shangu, unogona kusarudza kuita dumbu kudhanzi? Kare, kuti Oriental dumbu kutamba iri akatamba shangu. Izvi kunosimbisa kuti ukama mutambi pamwe Earth iri vasingasiyani uye kugara.
Zvisinei, kana uchigona, nokuti chero chikonzero, kana kungoti havadi kuita shangu, unogona kupfeka Gym shangu, kutamba flats kana chete masokisi. Nokuti mabasa shangu akasarudza ruvara masutu kana anoshandisa sirivha kana goridhe inzwi, shangu vanofanira kuitwa zvakafanana mumvuri.
Nhembe: mapikicha, pfungwa uye yakarongedzwa
Mutambi Oriental Kutamba vanowanzoshandisa siyana nenhumbi uye unhu kuti kutamba. Izvi zvingava zvameso uye Scarves, loincloth, dhuku, sabers, chandeliers, runzimbe nezvimwe nenhumbi. Vopa nhamba mavambo uye flair.
Nhembe uye dumbu kutamba bhandi - chinokosha chikamu rokumabvazuva inoita. Sezvo bhandi zvinofanira kugara zvakasimba muhudyu dzako panguva nokutamba, monyorora uye kwete kurasikirwa chimiro chayo, chinoitwa rejira mikobvu, izvo vasonanidza kune nyoro uye kusanduka hwaro. Loincloth basa sequins, marozari, beading, uye nechepasi iri akashongedzwa semanekiresi dzavo kana masa. Kana mutambi anoita sangano rechiuno chake, nezvomumutsipa uye mupendero mutinhimira jingle uye-chinja, chaining pachavo kuti Fafitera iticherechedze.
Zone nokuti dzokuMabvazuva kutamba: jira kushongedzwa. Zvingaita ngazviitwe nemaoko ake?
Kutonga nezvinooneka dzenhoroondo canons, mumwe mutemo unoti zvinhu zviri inoita kuti dzokuMabvazuva kutamba ari sikavha, bhandi kana loincloth. Musikana anogona shongedza pamwe marozari kana mari, uye iri zvinowanzoshandiswa zvose panguva imwe chete. Munguva kuuraya, ivo kutamba kuti urove zvinyoronyoro jingle mutambi kufamba, kutanga kunzwa nerunyararo uye mashiripiti kumabvazuva usiku. Nhembe nokuti dzokuMabvazuva kutamba - ndiwo rokupedzisira uye nopindirana kubata kuti mufananidzo wenyu.
How kushandisa loincloth kuti dumbu kutamba? Simple: zvinofanira kuva nyore kusungirira muchiuno. Kana ukasarudza kuita sikavha kuti dumbu kutamba woga, unofanira kunyatsoongorora aswedere ayo chimiro, kushongedzwa uye kusarudza rejira.
Mavara zvinogona zvakasiyana maererano tsvuku, zvitema, yero, girini uye nevamwe. Unogona kungotora bhandi kuti dumbu kutamba ari Ruvara sutu, uye iwe unogona kusarudza achisiyanisa mumvuri - sarudzo chete nokuti mutambi!
Yeuka kuti mabhandi pamusoro inosiyana panguva kutamba kufamba vazvibate zvakasiyana. Kazhinji, kureba uye upamhi hakuiti pfuura rimwe mita.
Unogona kuita nyore sikavha zvishomanana kana asina kushongedzwa, asi unogona uvhure dzemaoresa bhandi yakawanda sequins, masa uye semanekiresi. Zvimwe zvinhu zviri koshitomu inowanzopiwa chaizvo zvakanaka vaiita panguva kutamba kufamba, zvichiita kuyevedza uye bewitching ari Fafitera.
The mhando izvo zvinogoneka kuti loincloth zvakasiyana; zvingava denderedzwa, rectangle, Triangle kana denderedzwagama. Kuti kuverenga zvikuru yakakunakira chisarudzo, unofanira yokuzvionera vaine zvakasiyana yokutevedzera. Saka uchanzwisisa ipi bhandi chinonyanya zvakakunakirai.
Kazhinji, bhandi kumabvazuva kutamba vasonanidza kubva zvemapapu rinenge zvakadai Somuenzaniso, chiffon. Leather loincloth chete vachava uremu suit uye zvimwe kunyange kuvhiringidza kuurayiwa kutamba. A kubhururuka rejira segirazi, kufanana chiffon, haangatenderi kungatadzisa nemasangano, rine siluetti kusunungura ndipo.
Wechipiri rinofarirwa kupfuura jira bhandi The ndiyo vherevheti. Micheka kwoumbozha taura runako maumbirwo uye rakanatswa kunaka vachitamba, uyewo kuumba kunzwa yokuMabvazuva kunatsiridzwa. Nhembe dzakagadzirwa vherevheti vosiya kunyanya achirova kwete chete nokuda nyoro zvinyama uchenjeri, asi chaipenya paari pakanyorwa shimmering mari.
Kuwedzera kune munyama izvi, nokuti loincloth, unogona kushandisa organza, tatamuka satin, music-chiffon.
Tine zvakawanda zvokutaura pamusoro design, asi zvinofanira kudzoswa kuti zviri nani kuti bhandi nyore. Yeuka kuti imwe nekumwisa marozari nezvomumutsipa vasiri chete newewo uremu jira, asi anogona kuparadza chose Kutarira yacho inoita.
Sei wakabatanidzwa munhu cardigan kukirosha: zano uye tsananguro
Modelling kubva acharungwa mukanyiwa beginners: tenzi kirasi
A Mazano shoma sei kuita uta uye museve namaoko enyu
How kuti Poppy Paper: gadzira uye kushandisa mikana
Mabhomba kuti kugeza - chisingakanganwiki ruzivo kumba
Armhole - hazvina kuoma
Leukocytes: zvinowanzoitwa nevakadzi. Chimiro chemaukocyte mumukadzi ane pamuviri
The Decor kwemasvingo nemaoko ake pachake - mukana mukuru kuzorodza chitarisiko chavo uye mari
Bleached oak mukati mekunze
Chii absolutism uye mhedziso umambo?
Notarised simba gweta
Clematis Hegli Hybrid: Mufananidzo, tsanangudzo. Kudyara uye kutarisira
The mvura mudziva akatendeuka munyoro, chii kuita? dzinoshanda kurumbidza
Pilates nokuti Weight Loss
"Ciclovir" (mahwendefa): mirayiridzo yekushandiswa kwemishonga, tsanangudzo, mifananidzo, maitiro
Don Cossack Stepan Timofeevich Razin: Biography, nhoroondo, kiyi misi uye zvinonakidza zvinhu
Article pamusoro chii anoratidza kuita kubvisa dumbu mafuta
Historic beach nekristaro mvura yakachena: Blue mhenderekedzo (Sevastopol)